5 Nzira Snapchat Inogona Kushandiswa kusimudzira Bhizinesi Rako | Martech Zone
Sezvo mapuratifomu enharembozha achikwira mukuzivikanwa, panogara paine mukana wekushandisa chikuva chekutaurirana nekuita nevanogona kutenga. Snapchat sezviri pachena yakapfuura izvo tarisiro, iine vanopfuura mamirioni zana vashandisi vezuva nezuva vari kuona anopfuura mamirioni masere mavhidhiyo mazuva ese.
Snapchat inopa mabhureki uye vanogadzira zvemukati mukana we gadzira, kukurudzira, kupa mubairo, kugovera, uye kuwedzera iyo yakasarudzika yekudyidzana kugona kwepuratifomu.
Vashambadzi vari kushandisa sei Snapchat?
M2 Kubata Australia yakagovana yakakura infographic, Iyo Snapchat Inogona Sei Kuwedzera Yako Brand, uye yakapa nzira dzinotevera shanu dzinogona kushandiswa nekambani yako Snapchat.
Ipa mukana wekurarama zviitiko - fadza vateereri vako nemaonero echokwadi ezvigadzirwa, zvigadzirwa zvekutengeserana, kana zviitiko zveye-zve-zvemhando.
Endesa zvakavanzika zvemukati - ipa yakasarudzika kana yakasarudzika yezvinyorwa kune vateereri vako yavanogona kusagamuchira pane mamwe mapuratifomu.
Govera makwikwi, maricho kana kukwidziridzwa - ipa promo kodhi kana zvidzikiso kune vateveri. Kupa uye kukwidziridzwa inzira dzaungaite kuti vateveri vako vadzoke.
Tora vanhu kuseri kwezviitiko - ita vateereri vako nekupa zviri kumashure-kwe-zviitiko zvemukati uye uratidze kuti yako mhando inosiyanisa sei pachayo.
Partner neveSnapchat vanokurudzira - hunyanzvi Snapchat vanokurudzira inogona kukubatsira iwe kuparadzira kuziva kune huwandu hwevanhu hwakaoma kusvika kuburikidza neyechinyakare midhiya.
Tags: snapchatsnapchat kushambadzira
Chinyorwa chinodzidzisa kwazvo. Ini ndinobvumirana newe kuti nekukwira kwemagariro enhau mapuratifomu mukurumbira, panogara paine mukana wekushandisa chikuva chekutaurirana nekuita nevatengi vatengi. Snapchat inzvimbo inozivikanwa pasocial network iyo inokutendera kuti ugovane mavhidhiyo nemifananidzo neshamwari dzako uye nemhuri. Vese vashandisi vekushandisa foni vanoona vhidhiyo imwe chete zuva rega rega. Ndakafarira mapoinzi mashanu akurukurwa muchinyorwa chino senge mashandisiro ari kushandisa snapchat. Mabhizinesi ari kushandisa snapchat yekusimudzira zvigadzirwa pamwe nekuendesa zvakavanzika zvemukati. Verenga iyi link: https://www.animatedvideo.com/blog/numbers-branding-snapchat/
Ichi chinongedzo chinogovera iyo yekumaka mikana yeiyo snapchat.